June 18 2013 07:38:03
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo ku wajahan degmada Buulo Burde
Taliska AMISOM ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in la gaaray waqtigii Al-Shabaab laga saari lahaa deegaanada Gobolka Hiiraan, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ka socda Jabuuti ay bilaabeen dhaq dhaqaaqyo ciidan. master on June 18 2013
· Dab baab'iyay hanti fara badan oo xalay ka kacay suuqa magaalada Gaarisa
Dab geystay qasaare hantiyadeed ayaa xalay ka kacay suuqa magaalada Gaarisa ee Gobolka Waqooyi bari Kenya, iyadoo dabkan uu baabi'iyay inta badan ganacsigii ku yiil suuqaas. master on June 18 2013
· Howlgalo roondeyn ah oo caawa ka socda Muqdisho, xilli xalay madaafiic lagu garaacay Madaxtooyada
Howlgalo roondeyn ah ayaa caawa ka socda qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo Ciidamada Booliska AMISOM, iyo Booliska Soomaaliya ay iska kaashanayaan howl galkan roondada ah, kadib markii xalay tiro Hoobiyeyaal ah lagu soo garaacay Xarunta Madaxtooyada. master on June 17 2013
· Ciidamada AMISOM ee Jabuuti oo markii u horeysay weeraro ku qaadaya goobaha Al-Shabaab kaga sugan yihiin Hiiraan
Ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Jabuuti ayaa markii u horeysay bilaabay dhaq dhaqaaq ciidan oo ku wajahan deegaanada Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan, iyadoo maanta ay la wareegeen deegaano hoos taga magaalada Beledweyn. master on June 17 2013
Read More · 0 Comments · 1311 Reads
· Kulan wadatashi ah oo ay ka qeyb galayaan Maamulada Gobolada Dhexe oo maanta ka furmay Muqdisho (Sawirro)
Kulankan wadatashi ah oo la isugu keenay maamullada gobollada dhexe ee dalka oo ay soo qabanqaabiyeen hay�adda CRD iyo FCA-Finland oo kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha Somalia ayaa maanta ka furmay Muqdisho. master on June 17 2013
Read More · 0 Comments · 4249 Reads
· Xarakada Al-Shabaab oo soo bandhigtay Saraakiil Kenyan iyo Hub (Sawirro)
Xarakada Al-Shabaab ayaa meel ka mid Koofurta Soomaaliya ku soo bandhigtay labo sarkaal Kenyan ah, Hub iyo qalab isgaarsiin, kaasoo ay ku soo qabsatay dagaal bishii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Dhamajaaley master on June 17 2013
Read More · 0 Comments · 5691 Reads
· Nin madaxa looga jiray oo Xaaskiisa dilay, isna is dilay iyo nin kale oo maseer dartii xaaskiisa indha wax ka gaarsiiyay
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay ayaa sheegaya in labo dhacdo oo aad u naxdin badan ay ka dhaceen xalay, kadib markii nin la sheegay in madaxa looga jiray uu xaaskiisa oo xaamilo aheyd dilay, kadibna is dilay. master on June 17 2013
Read More · 0 Comments · 2649 Reads
· Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale oo Muqdisho yimid
Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho.
mahad on June 17 2013
Read More · 0 Comments · 872 Reads
· Maamulka Gobolka Sh/Dhexe iyo beesha Walamooy oo heshiis gaaray
Kulan ay ka qeybgaleen maamulka gobolka Sh/dhexe iyo nabadoonada beesha Walamooy ayaa lagu gaaray heshiis kadib markii dagaal uu dhex maray dhowaan ciidamada dowlada iyo maleeshiyo beeleed ka soo jeeda beesha Walamoy oo ka mid ah Lixda Shiidle. mahad on June 17 2013
Read More · 0 Comments · 2943 Reads
· Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo saaka howl galo ka wada xaafado lagu tuhmayo in madaafiicdi xalay laga soo tuuray
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa saaka si wada jir ah waxay howl galo uga wadaan xaafado ka tirsan degmada Hodan, iyadoo saraakiisha dowladda ay sheegeen in xaafadaha qaar ay tuhmayaan in madaafiic laga soo tuuray. master on June 17 2013
Read More · 0 Comments · 2180 Reads
· Madaafiic Hoobiyeyaal oo xalay mar kale lagu garaacay Xarunta Madaxtooyada Villa Somalia
Madaafiic Hoobiyeyaal ayaa xalay mar kale lagu garaacay Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya, iyadoo madaafiicdii xalay ahaayeen kuwo kooban. master on June 17 2013
Read More · 0 Comments · 1802 Reads
· Page 1 of 37: 1234...37
jowhar.com475,876 unique visits